नयाँ दैनिक | पहारीको प्रश्न : आजसम्म चलेँ, अब चल्न सक्दिनँ ? पहारीको प्रश्न : आजसम्म चलेँ, अब चल्न सक्दिनँ ? – नयाँ दैनिक
हामी पनि त्यस्तै भए त हिजोको व्यवस्था फाल्नुको के अर्थ ?
माघ ५, पोखरा । नेताले राज्यबाट धेरै सेवासुविधा लिए भनेर सर्वत्र आलोचना भैरहेका बेला गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव पहारीले भने सेवासुविधा नलिने घोषणा गरे । जनप्रतिनिधि भएबापत् राज्यबाट पाउने सुविधा जनताकै लागि खर्च गर्ने पहारीले बताएका छन् । युवा संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका पहारी कास्कीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका हुन् । उनले जनप्रतिनिधि जनताको शासक नभई सेवक भएको दोहोर्याए ।
सो घोषणापछि नयाँ दैनिकसँग पहारीले भने :
हामी जनप्रतिनिधि जनताको सेवा गर्न आएका हौँ । पहिलो पटक ४३ वर्षको उमेरमा म राज्यको सेवा सुविधा लिने ठाउँमा पुगेँ । राजनीतिमा लागेका त्यत्रा वर्ष राज्यबाट सुविधा नलिए पनि भयो भने अब पनि लिनैपर्छ भन्ने मलाई लागेन । तर, सुविधा नलिई यो कसरी चल्छ ? भन्ने प्रश्न पनि आउला । म आजसम्म चलेँ भने अब चल्न सक्दिनँ र ? मेरो म्याडमको जागिर छ । घरको स्थिति पनि चल्न सक्ने खालकै छ । सांसदले पिएको तलब, भत्तासमेत कुम्ल्याउनु गलत हो ।
हिजो यस्तै थियो भनेर हामी पनि त्यस्तै भए त हिजोको व्यवस्था फाल्नुको के अर्थ ? हाम्रो यत्रो त्याग र वलिदानीको के अर्थ रह्यो ? त्यो सम्झेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो । जनप्रतिनिधिको नाताले पाएको सुविधा जनताकै लागि किन नलगाउने भनेर नलिने घोषणा गरेको हो । हामीलाई सुविधा जनताले कर कट्टा गरेर दिएको हुनाले मैले जनताकै लागि खर्च गर्ने निर्णय लिएँ । तर, सबैले यसो गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।
मासिक ४१ हजार मैले सबै कटाएर पाउँछु । सुविधाको रकमबाट फेवा ताल संरक्षणका लागि रु. ८० हजार उपलव्ध गराएँ । कास्कीकोटमा पानी लिन एक, डेढ घण्टा टाढा जानुपर्ने वाध्यता रैछ, ७०–८० हजार खर्च गरेर पाइप ल्याएपछि पानी खान पाए त्यहाँका जनताले । हाम्रा विद्यालयहरुमा करोडौँका भवन छन् तर पानी छैन, सावुन छैन । हात नधोइ खाजा खाँदा रोग लागिराछ । विद्यालयहरुमा युरोगार्डको व्यवस्था गरिँदैछ ।
हामीले शुन्यतामा महल होइन, यथार्थमा झुपडी बनाउनुपर्छ । स–साना कामबाट परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ भनेर कपडा वितरण लगायतका काम गर्दैछौँ । बलात्कारमा परेकी श्रेया सुनारलाई राहत उपलव्ध गराउने लगायतका काम गर्दैछु ।
अहिले पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टीको दुईतिहाईको सरकार छ । यो सरकार असफल हुनु भनेको मुलुक नै असफल हुनु हो । यसलाई असफल हुन नदिन यसको नेतृत्वका साथीहरुले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कम्युनिस्ट जीवनशैली अपनाउनुपर्यो ।
यो अवस्थामा आउन हामीले हजारौँ मान्छे गुमाएका छौँ । लाखौँ मान्छेहरु घरबारबिहीन भएका छन्, हजारौँ मान्छेहरु अङ्गभङ्गको अवस्थामा छन् । सामान्य तरिकाले यो परिवर्तन आएको हैन । व्यवस्था आफैँमा खराब नभए पनि कार्यान्वयन गर्नेले सही विचार र नीतिका रुपमा जान सकिएन जनताले राम्रो मान्दैनन् । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्नुस् न ! हिजो शोभियत रुसमा त्यत्रो संघर्षमा समाजवादी सत्ता स्थापना भयो । तर चरोमुसो नमरी तासको महलझैँ गर्लामगुर्लुम सत्ता ढलेन ? यो कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
व्यवस्था फेरियो, जनताको अवस्था फेरिएन । यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । यो व्यवस्था ख्यालख्यालमा आएको होइन । हिजोकै शासकजस्तो हामीले पनि त्यसै गर्यौँ भने के अर्थ भयो ? गणतन्त्र आएको जनताले अनुभूति गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले शासक होइनौँ, सेवक हौँ भन्ने बुझिएन भने महान् ऐतिहासिक उपलव्धि गुम्न सक्छ । एउटा राजा फालियो, सयौँ राजा भए भन्ने स्थिति आउनुहुँदैन । नेपाललाई समृद्ध हुन नदिन अन्य शक्तिले खेलोमेला गरिरहेका छन् । उनीहरुले प्रश्न उठाउन वातावरण दिनुहुन्न ।
राजनीति समाजसेवाको एउटा रुप हो । मलाई समाजसेवामा लागिरहने प्रेरणा परिवारबाटै मिलेको हो । नबिराउनु, डराउनु भन्नुहुन्थ्यो बाबाले । जे कुरामा पनि सकरात्मक ढंगबाट सोच्ने, लाग्ने कुरा नै प्रमुख हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि ।
युवा संघको नेतृत्व लिँदालिँदै मलाई पार्टीले प्रदेशमा निर्वाचन लड्न पठायो । १०, ११ वर्षपछि जनताबीचमा आउँदा पनि पाँच हजार तीन सयको मतान्तरले जनताले जिताए । जनताको बीचमै जाने, जनताकै दुःख–सुख बुझ्ने भनेर एक वर्षसम्म यसरी नै सोचिराको छु । प्रदेशमा जनतामुखी कानुन निर्माण गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लागिरहेको छु । जे काममा लाग्नुपर्छ खुसी र गर्वसाथ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । खुसी र गर्वसाथ नै राज्यबाट सेवासुविधा नलिने घोषणा गरेको हुँ ।
म आफैँ मृत्युको मुखबाट फुत्केर यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे । २०३३ साल कात्तिक १४ गते पोखरा–६, बैदाममा जन्मिएको हो– बुवा रामराज र आमा जमुनादेवीको कोखबाट । तीनजना सँगै जन्मिएको (तिम्ल्याह) । भाइ र बहिनी ६ महिनामै बिते । मलाई पनि बाँच्छ त कसैले भन्दैन्थे रे ! कुनै न कुनै दिन मर्ने पनि निश्चित नै छ । तसर्थ, बाँचुञ्जेल जनताको पक्षमा लागिरहने प्रण गरेको छु । राज्यबाट लिनेभन्दा जनतालाई दिने मेरो प्राथामिकता हो ।